IFirefox 87 isivele ikhishiwe kanti lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
Inguqulo entsha yeFirefox 87 isivele ikhishiwe kanye nokuvuselelwa kwinguqulo engu-78.9.0 yokusekela yesikhathi eside nakule nguqulo entsha kwethulwa amanoveli amasha ahlukahlukene njenge khombisa amalebula ku- imodi egqanyisiwe ekusesheni, ukuthuthuka kwe amathuluzi wonjiniyela nokuningi.
Ngaphezu kokuqanjwa okusha nokulungiswa kwamaphutha, IFirefox 87 ilungise ukuba sengozini okuyi-12, okuyi-7 yayo emakwe njengengozi. Ukuba sengozini kwe-6 (kuhlanganiselwe i-CVE-2021-23988 ne-CVE-2021-23987) kubangelwa izinkinga zememori, njengokugcwala kwe-buffer nokufinyelela ezindaweni zememori esezikhululiwe.
Izici ezintsha eziyinhloko zeFirefox 83
Kule nguqulo entsha yesiphequluli lapho usebenzisa umsebenzi wokusesha bese wenza kusebenze imodi yokugqamisa yakho konke ukufana okutholakele, ibha yokuhambisa manje ikhombisa amalebula ukukhombisa ukuma kwezinkinobho ezitholakele.
Izinto ezisetshenziswa kaningi zisusiwe kwimenyu yeLabhulali, ngoba kumenyu yeLabhulali kusele kuphela izixhumanisi zamabhukhimakhi, umlando nokulanda (amathebhu avumelanisiwe, amabhukumaka wakamuva, nohlu lwamaphakethe kuyasuswa). Ku-skrini engezansi, ngakwesobunxele, isimo sinjengoba besinjalo, futhi ngakwesokudla, njengoba kwakunjalo kuFirefox 87:
Imenyu yonjiniyela wewebhu yenziwe lula kakhulu: izixhumanisi ngazinye zamathuluzi (umhloli, i-web console, i-debugger, iphutha lesitayela senethiwekhi, ukusebenza, umhloli wesitoreji, ukufinyeleleka nokusetshenziswa) kushintshwe ngento ejwayelekile yamathuluzi wonjiniyela wewebhu.
Futhi imenyu yosizo yenziwe yaba lula, lapho kususwe khona izixhumanisi zamakhasi okusekela, izinqamuleli zekhibhodi, nezincwadi zemihlahlandlela futhi manje seziyatholakala ekhasini lokuthi Uhlolojikelele Losizo. Inkinobho yokungenisa kusuka kwesinye isiphequluli isusiwe.
Indlela ye-SmartBlock ingeziwe, exazulula izingqinamba kumasayithi adalwa ukuvimba imibhalo yangaphandle kwimodi yokuphequlula yangasese noma ngokwenza ukuvimba okuthuthukisiwe kokuqukethwe okungafuneki (strict)
I-SmartBlock ishintsha ngokuzenzakalela imibhalo esetshenziselwe ukulandela umkhondo ngeziqu ukuqinisekisa ukulayishwa kwesayithi okufanele. Iziteki zilungiselelwe imibhalo ethile ethandwayo yokulandela abasebenzisi ababalwe kuhlu lokunqamula, kufaka phakathi imibhalo ene-Facebook, Twitter, Yandex, Vkontakte, namawijethi weGoogle.
Futhi, kushiwo lokho ngephesenti elincane labasebenzisi, indlela I-Fission inikwe amandla ngokusetshenziswa kwezakhiwo ezifundwayo eziningi Kwenziwe isimanjemanje ngekhasi elikhulu lokuvimba. Lapho i-Fission inikwe amandla, amakhasi avela kumasayithi ahlukahlukene ahlala abiwa kwimemori ngezinqubo ezahlukahlukene, ngalinye lisebenzisa i-sandbox yalo ehlukile.
Ngasikhathi sinye, ukwahlukaniswa kwezinqubo akwenziwa ngamathebhu, kepha kuzizinda, ezikuvumela ukuthi uqhubeke nokuhlukanisa okuqukethwe kwezikripthi zangaphandle namabhulokhi e-iframe.
Okwabathuthukisi bewebhu, ngemodi yokuhlola ikhasi, ikhono lokulingisa imibuzo yemidiya liyasetshenziswa "isikimu sombala esithandwayo" ukuhlola ukwakheka okumnyama nokukhanya ngaphandle kokushintsha izingqikithi zokuklama ohlelweni lokusebenza Ukuvumela ukulingiswa kwamatimu amnyama nokukhanya, izinkinobho ezinomfanekiso welanga nenyanga zingeziwe ekhoneni eliphezulu kwesokudla kubha yamathuluzi wonjiniyela wewebhu.
Futhi Ukuphathwa okuthuthukisiwe kwemithetho ye-CSS engasebenzi kumodi yokuhlola ye-CSS kuyagqanyiswa. Ngokuyinhloko, impahla "yokuhlelwa kwetafula" manje ikhutshaziwe kuzinto ezingezona ezethebula, futhi izakhiwo ze- "scroll-padding- *" zimakwe njengezingasebenzi kuzinto ezingasongeki. Kususwe ukumakwa okungalungile kwezakhiwo ze- "text overflow" zamanani athile.
Ekugcineni kushiwo ukuthi igatsha le- IFirefox 88, efake ukuhlolwa kwe-beta, ivelela ukusekelwa kwayo kokuncipha kokuncishiswa kwamapaneli wokuthinta eLinux ngezindawo zokuqhafaza ezisuselwa kumthetho olandelwayo weWayland nokufakwa kokusekelwa kwefomethi yesithombe ye-AVIF (AV1 Image Format) ngokuzenzakalela, esebenzisa ubuchwepheshe bokucindezelwa kwe-intra-frame ye-AV1 Ifomethi yokufaka ikhodi ngevidiyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IFirefox 87 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
UJesu Uyaziwa. kusho
Angijwayele ukusebenzisa lesi siphequluli, kepha ukusicwaninga nokuzama kancane ngisithande. Ngicabanga ukuthi into efaneleke kakhulu kimi njengomfundi kulesi sibuyekezo esisha kube ukugqama emakhasini lapho kuseshwa amagama angukhiye. Ngakolunye uhlangothi, ukuthuthuka kokuphequlula okuyimfihlo kusesikhathini kakhulu futhi kwanele.
Phendula uJesús Sabido.